Hada Dalbo Dhaqaaleyahanada Yaryar (Adeegga Firfircoonida Gudaha) Bannaan: Warka Dugsiga Ee Hadda
Hada Ka Codso Dhaqaaleyahanada Yaryar (Adeegga Firfircoonida Gudaha) Bannaanada PricewaterhouseCooper (PwC)
Filed in Job by Shaqaalaha tifaftirka Juun 18, 2021
Hada Ka Codso Dhaqaaleyahanada Yaryar (Adeegga Firfircoonida Gudaha) 2021: PricewaterhouseCooper waxay u shaqaalaysiineysaa Dhaqaaleyahanno Yaryar Musharaxa ugu habboon waa inuu haystaa ugu yaraan shahaadada Bachelor-ka ee Ingiriisiga, Xisaabta, Cilmiga Bulshada ama anshaxa dhaqaalaha.
PwC shirkadaha waxay ka caawiyaan ururada iyo shakhsiyaadka abuurista qiimaha ay raadinayaan. Waxaan nahay shabakad shirkado ka shaqeeya 158 dal oo leh in ka badan 180,000 oo qof oo ay ka go'an tahay inay gaarsiiyaan tayada adeegyada Hubinta, Canshuuraha iyo La-talinta
Waxaan raadineynaa a Manager si loo kormeero waxqabadyada u suurtageliya macaamiisheenna inay ka xaqiiqsadaan faa'iidada ay ka leeyihiin hawlahooda.
Meelaha gaarka ah ee diiradda la saarayo waxaa ka mid ah hagaajinta Hawlaha, Naqshadeynta qaabka hawlgalka, Falanqaynta hannaanka iyo naqshadeynta, Isugeynta sahayda, Maareynta Qiimaha, Falanqaynta Dhaqaalaha, Maareynta Xiriirka Macaamiisha (CRM) & Istaraatiijiyadda Mashruuca / Barnaamijka.
Waxaan hada qoreynaa inaan buuxino booska hoose:
Cinwaanka Shaqada: Dhaqaaleyahan yar (Adeegga Shirkadda Gudaha)
Lambarka Tixraaca: 125-NIG00104
Waaxda: Adeegyada Shirkadaha Gudaha
Doorka & Mas'uuliyadaha
Samee cilmi baaris tayo leh oo tayo leh iyada oo la raacayo hagista Dhaqaalaha, iyadoo la siinayo talooyin cilmi baaris iyo falanqeyn xog ah oo loogu talagalay Wargeysyada Dhaqaalaha ee PwC Nigeria iyo daabacadaha kale ee Hogaaminta Fikirka
La soco horumarinta isbeddelka caalamiga ah iyo kan gudaha ee warshado kala duwan, sii odoroso isbeddelada ganacsiga iyo xaaladaha maaliyadeed iyo sidoo kale cilaaqaadka asalka ah iyadoo la adeegsanayo farsamooyinka tusaalayaasha
Adeegsiga aaladaha farsamada: falanqaynta suuqa, moodeelka ganacsiga, istiraatiijiyadda, qiimeynta siyaasadda iyo tusaalaha dhaqaalaha ee horumarinta xalalka macaamiisha
Ka shaqee hawlo badan oo adag oo ku saabsan dhammaan shabakadda PwC iyadoo lagu saleynayo mashruuc
La xiriir oo ka qaybgal macaamiisha isbeddelada dhaqaale iyo warshadeed ee soo kordhay iyadoo lagu saleynayo soosaarka falanqayntayada
Joogtee qoraallada Hoggaanka Fikirka iyo keydka Macro; hubinta marin u helka shabakadda weyn ee PwC Nigeria
La shaqee kooxaha kale ee ganacsiga si loo gaarsiiyo soo bandhigida macmiilka iyo codsiyada macluumaadka, matalo kooxda kulamada, u gaarsiinta awoodaha PWC macaamiisha.
Waxbarashada: Degree Dhaqaalaha / Maaliyadda / Xisaabta
Shuruudaha fasalka: 2: 1 iyo wixii ka sareeya
Khibrad Aan ka badnayn 2 sano oo khibrad u leh cilmi-baadhe dhaqaaleyahan ama falanqeeye
Khibrad shaqo oo khuseysa, xirfado gorfeyn xoog leh oo ku saabsan dhinacyada dhaqaalaha iyo falanqaynta dhaqaalaha.
Xiisaha loo qabo arrimaha makrooyinka adduunka iyo gudaha iyo fahamka suuqyada maaliyadeed.
Xirfadaha isdhaxgalka shaqsiyadeed iyo xirfadaha soo bandhigida, oo ay kujirto awooda xiriirinta arimaha farsamada ee adag qaab fudud, hadal iyo qoraalba.
Riix halkan Wixii macluumaad dheeraad ah.
Cusbooneysiinta Codsadeyaasha Liiska Gaaban
Haddii laguu xushay, markaa cagta ayaa lagaa saaray albaabka. Waana waqtigii aad ka iftiimin lahayd marxaladda ugu dambeysa - wareysiga.
Si kastaba ha noqotee, waxay noqon kartaa telephonic, Skype, ama wareysi fool-ka-fool ah. Tanina waxay kuxirantahay loo shaqeeyaha. Marka liistada liistada la qoro:
Ku dadaal inaad hesho macluumaad ku saabsan shirkadda.
Sidoo kale, hubi inaad leedahay aragti cad. Isku day inaad ogaato sababta aad u rabto booska gaarka ah. Iyo sida aad noqon laheyd taam wanaagsan. Sidoo kale, dhex mar arjigaaga.
Intaa waxaa sii dheer, noqo mid is-dhexgal ah. Waa wareysi, ee ma ahan su’aal. Waxaa jira waxyaabo badan oo adiga kugu saabsan intaad dib u bilaabayso.
Dhaqanku wuxuu marayaa waddo dheer. Marka, qaado wareysiyo majaajilo ah asxaabtaada ama ku celceli ku hadalka muraayadda horteeda.
Waa dhif, laakiin mararka qaarkood waxaad helaysaa warqad dalab oo si toos ah ugu saleysan dalabkaaga. Waxaad bilaabeysaa qorsheynta dabaaldegga, laakiin xusuusnow qodobbada qaarkood ka hor intaadan u gudbin qaabka xafladdaas: Ku hel qoraal ahaan.
Sidoo kale, si faahfaahsan uga gudub dalabka qoran. Iyo inaad hubiso in dhammaan faahfaahinta muhiimka ah la xuso oo aad weydiiso su'aalo haddii aadan waxba fahmin. Sida astaanta shaqada, taariikhda bilawga, muddada, iyo gunnada, iwm.
U dir shaqo-bixiye warqad mahadnaq ah, markii aad aqbasho soo-jeedinta.
Sidoo kale, la soco e-mayl xaqiijinaya taariikhda bilowgaaga iyo muujinta xamaasaddaada doorkaaga cusub.
Laga soo bilaabo xagga kore, waxaa muhiim ah inaad ogaatid inaynaan iskaashi la yeelanayn shirkadahaas. Waxaan kaliya u diyaarineynaa macluumaadkan si aan kaaga caawino inaad hesho shaqadaada aad ku riyootay. Sidan oo kale, markaad dalbaneysid, hubi inaad sameyso cilmi baaris dheeraad ah oo ku saabsan shirkadda. NASIIB WACAN.
Khaladaadka la iska ilaaliyo Inta Codsiga la sameynayo
Dad badan ayaa ku guuldareysta codsiyo badan sababa la xiriira inaysan u qalmin, laakiin khaladaad badan awgood. Marka fiiro gaar ah u yeelo waxyaabaha soo socda:
Dalbo waqtiga loogu talagalay, ha sugin waqtiga kama dambaysta ah.
Samee habraacyada dalabka keligaa, ha u dirin cidna si looga fogaado khaladaadka ku jira xogtaada
Iska ilaali naftaada cusbooneysiinta ku saabsan arjiga
Hubso inaad keento dhammaan shuruudaha lagama maarmaanka ah
Waqti sii si aad u hubiso faahfaahintaada ka hor intaadan gudbin.
Musharrixiinta waa inay codsadaan hal boos shaqo, Musharrixiinta isku dayaya inay codsadaan dhowr jeer ayaa lagala laaban doonaa codsigooda
Codsiga khadka tooska ah waa bilaash.
Jagooyinka banaan ee hadda kajira Nigeria
Shaqaaleysiinta Dowlada Federaalka 2021;
Shaqooyinka NIA ee Nigeria;
Wadarta Shaqaaleynta Nigeria;
Qorista Ciidanka Cirka ee Nigeria;
Qorista Booliska Nigeria;
Qorista Adeegga Xabsiyada Nigeria;
Qorista Adeegga Dabka ee Federaalka;
Qorista Badbaadada Wadooyinka Federaalka 2021;
Qorista Dakhliga Gudaha Gudaha ee 2021;
Qorista Adeegga Kastamka Nigeria;
Shaqooyinka Saliida iyo Gaaska ee Nigeria;
Shirkadaha ugu sareeya ee Nigeria ee qoraya Qaadashada Bishaan;
Shaqooyinka ICRC ee Nigeria;
Si kastaba ha noqotee, waxaan aaminsanahay in macluumaadkan ku saabsan PricewaterhouseCooper (PwC) Shaqooyinka Nigeria 2021 ay adiga waxtar kuu leedahay? Waa maxay sababta aadan ula wadaagin asxaabtaada halkaas jooga adoo gujinaya badhanka saamiga ee boggan.
Waxaad sidoo kale iska qori kartaa si aad u cusbooneysiiso wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan mowduucan.
Haddii aad nooga baahato inaan kaa caawino macluumaad cusub oo cusboonaysiin ah waqtiga saxda ah ee ku saabsan Dalbasho Hada ee Dhaqaaleyahannada Yaryar (Adeegga Firmka Gudaha) Bannaanaynta 2021.
Si naxariis leh noo siiya lambarka taleefankaaga iyo cinwaanka emailka sanduuqa faallooyinka ee hoose.
Maxaad ka qaadanaysaa Codsiga Hada Loogu Talagalay Dhaqaaleyahanada Yaryar (Adeegga Firfircoon ee Gudaha) Bannaanaynta 2021? Waxaan idinka codsanayaa inaad isla tan isticmaashaan fursad si aan ula wadaagno macluumaadkan kuwa kale adoo adeegsanaya Facebook, Twitter, or Google+. badhanka wadaag qeybta hoose.
PricewaterhouseCooper (PwC) Qorista Kaaliyeyaasha Maamulka ee Qalinjabinta 2021
Hada Ka Codso Qorista Socda ee PricewaterhouseCooper (PwC) 2021 Cusboonaysiinta
Hada Ka Codso Falanqeeyaha Taageerada Codsiga IT-ga Shirkad Dadweynaha ay Leedahay
Qorista Shaqaalaynta Dawladda Lagos 2021/2022
Adeegyada Isku-dhafan ee Fez Isku-xirka Shaqada Xaddidan 2021 www.fezltd.com
Michael Stevens La-tashiga Qorista 2021/2022 Xariirka Foomka Codsiga
Xariirka Shaqada ee PriceWaterHouseCooper Shaqada 2021 www.pwc.com.ng
Tags: Hada Ka Codso Dhaqaaleyahanada Yaryar (Adeegga Firfircoonida Gudaha) Bannaanada PricewaterhouseCooper (PwC), Hada Ka Codso Dhaqaaleyahanada Yaryar (Adeegga Firm Gudaha) Booska PricewaterhouseCooper (PwC) 2021, Dhaqaaleyahanada Yar (Adeegga Firm Gudaha) Bannaan, Shaqooyinka Lagos, QiimahaWaterHouseCooper
« Hada Ka Codso Qorista Socda ee PricewaterhouseCooper (PwC) 2021 Cusboonaysiinta
Qorista PricewaterhouseCooper ee Ku-Xigeenka Agaasimaha Maamulka 2021 »
Foomka Ogolaanshaha Jaamacadeed ee UNIUYO SCE 2021/2022 Fadhiga Tacliinta